March 2018 - Page9of9- My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မီးဖွားပြီးဘယ်လောက်အကြာမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမလဲ? မိန်းကလေးတော်တော်များများဟာ လှချင်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်ရော ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ချက်အရရော ပိုစားတဲ့အခါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးချိန်မှာမလိုအပ်တဲ့ အဆီပိုတွေ စုလာတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သဘာဝအရ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားနှစ်ခုဟာ ကိုယ်ဝန်ကြီးထွားလာတဲ့အခါ အလယ်မှာ”ဟ”သွားတတ်ပါတယ်။ မွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာ အရင်ကလို ပုံမှန်ပြန်မစေ့ဘဲ ကျန်နေတတ်တာ ကြောင့် ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း…
Things You Should Know About Reproductive Health:Part 4
သိကောင်းစေရာ မျိုးဆက်ပွားပညာ။(အပိုင်း ၄ တားကြစေလို ပိုးတွေကို) မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးမှာ အရေးကြီးတဲ့ ကိုယ်ဝန်တားခြင်း ကိစ္စလည်း ပြောပြီးပြီဆိုတော့ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါပိုးတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ ပြောကြရအောင်။ *လိင်မှတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေက ဘာတွေလဲ။ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေဟာ…
မွေးလမ်းကြောင်းချဲ့ဖို့ လိုမလို? မွေးလမ်းကြောင်းချဲ့တယ် ဆိုတာဟာ ကလေးမွေးဖွားချိန်မှာ မွေးဖွားရလွယ်ကူစေဖို့အတွက်မွေးလမ်းကြောင်းအဝကြွက်သားကို ခွဲစိတ်၍ ချဲ့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးမွေးသူတိုင်းမွေးလမ်းကြောင်းချဲ့ဖို့မလိုနိုင်ပါ။ အဓိကအားဖြင့် ကလေးထွားလွန်းသူများ ညှပ်စွဲ၊လေစုပ်မွေးရသူများ မွေးနေစဉ်ကာလတွင်း ကလေးမြန်မြန်ထွက်ရန်လိုအပ်သော အခြေအနေများ ( ဥပမာ – မွေးနေစဉ်ကလေးနှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်းများ) မိခင်အနေနှင့် ဆက်ညှစ်ရန်အားမရှိတော့သော(သို့) ရောဂါအခံ…